विलासी बन्दै यौन व्यापार - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
 २४ वर्षीया उपमा (नाम परिर्वतन) को कथा केही फरक छ । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी उपमाले आमाको पाठेघरमा पलाएको ट्युमरको उपचार गराउन एउटा फाइनान्समा रिसेप्सनको जागिर सुरु गरेकी थिइन् । जागिर थालेको एक हप्ता पनि नबित्दै उनी फाइनान्समा नियमित आउने एक ग्राहकसँग नजिकिइन् । ती ग्राहकले उनलाई एकपटकका लागि २५ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव गरे । त्यत्रो पैसा पाइने भएपछि उपमा लोभिइन् । ती ग्राहकसँग नियमित सम्पर्क हुन थालेपछि अन्य त्यस्तै ग्राहकसँग पनि उनको सम्पर्क हुन थाल्यो । मासिक ११ हजार रुपैयाँको रिसेप्सनको जागिरमा लागेकी उपमाले यौन व्यवसायबाट एक दिनमै १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी कमाउन थालेपछि उनको मन यतै भुलियो भने एक महिनामै आमाको उपचार खर्च पनि जुट्यो । आमाको उपचारपछि उनी फाइनान्सको जागिर छाडेर यही व्यवसायमा केन्द्रित भएकी छिन् ।
 रमेश (४१ वर्ष) (नाम परिवतन) एक निजी विद्यालयमा गार्ड छन् । बिहान ८ बज्दा नबज्दै रमेश श्रीमती रेश्मा (नाम परिवर्तन) अनि १० वर्षीया छोरीलाई लिएर एउटै स्कुटरमा हुइँकिन्छन् । श्रीमतीलाई रत्नपार्कमा छोडेर उनी छोरीलाई विद्यालय पुर्‍याउँछन् । बेलुका उनी प्राय: त्यही रुट हँुदै श्रीमतीलाई लिएर घर फर्कन्छन् । धेरैलाई लाग्ला, रेश्मा रत्नपार्कमा दिनभर के गर्छिन् त ? रत्नपार्क त रेश्माका लागि ‘ग्यादरि·जक्सन’ मात्र हो । त्यहाँ उनी ग्राहकसँग सम्पर्क गर्छिन् र कुनै सुरक्षित स्थानमा गएर त्यस दिनको कमाइको जोहो गर्छिन् । यौनकर्मी महिलाहरूको स्वास्थ्य तथा उनीहरूको मानवअधिकारका सम्बन्धमा वकालत गर्ने एक संस्थामा भेटिएकी रेश्मा यौन व्यवसायमा बाध्यताले लाग्नुपरेको कुरा बताउँछिन् ।
यसरी आउने ग्राहकसँग ४५ दशमलव १ प्रतिशत महिलाले दिनमा एक जनासँग मात्र सम्पर्क गर्छन् । त्यसैगरी ३० दशमलव ७ प्रतिशतले २ जना, १५ दशमलव ६ प्रतिशतले ३ जना तथा ८ दशमलव ६ प्रतिशतले चार वा त्यसभन्दा बढीसँग (एक दिनमा) यौनसम्पर्क गर्ने कुरा बताएका छन् । उनीहरूमध्ये १३ दशमलव ४ प्रतिशतले प्रत्येक दिन मादक पदार्थ सेवन गर्ने जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै ८ दशमलव ६ प्रतिशतले हप्तामा १ पटक, ३१ दशमलव ६ प्रतिशतले हप्तामा २ देखि ३ पटक, १० दशमलव ८ प्रतिशतले हप्तामा १ पटकभन्दा कम तथा ३६ दशमलव ४ प्रतिशतले कहिल्यै रक्सी सेवन नगर्ने कुरा बताएका छन् ।
रेडलाइट एरिया तोक्नु समस्या थप्नु हो
विजया ढकाल, कार्यकारी निर्देशक
यौन व्यवसाय कस्तो व्यवसाय हो ?
कसैले पैसा वा जिन्सी लिएर वा कुनै फाइदा लिएर एक वा एकभन्दा बढीसँग यौन सम्पर्कका लागि राजी हुने पेशालाई यौन व्यवसायका रूपमा हेरिन्छ ।
हाम्रो जस्तो यौनको विषयमा खुला नभएको देशमा पनि किन यति धेरै महिला यौन व्यवसायमा लागेका होलान् ?
गरिबी नै यसको प्रमुख कारण हो । महिलालाई पुरुषको तुलनामा जीवनयापन गर्न आवश्यक रकम जुटाउन गाह्रो छ, अशिक्षित महिलाहरू अझ दयनीय अवस्थामा छन् । कतिपयलाई त म यौन व्यवसाय गरिरहेकी छु भन्ने पनि थाहा हुँदैन । अहिले पहिलेको तुलनामा यौन ब्यवसायीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । त्यसको कारण बजार महँगो हुँदै जानु तथा जीवनयापन कठिन हुनु पनि हो । इमेल–इन्टरनेट आदिका कारण टेस्ट चेन्ज गर्न तथा सुविधाको जीवन बिताउन यो व्यवसायमा आउनेहरूको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ ।
शिक्षित तथा घरानिया महिला पनि यो व्यवसायमा छन् ?
होलान्, कतिपय पैसाको कमीले लागेका हुन्छन् । शिक्षित परिवारकाहरू सन्तुष्टिका लागि पनि यो व्यवसायमा संलग्न हुन्छन् तर यस्तो वर्गमा पैसा लिनेभन्दा पनि दिनेहरूको संलग्नता बढी छ ।
यौन व्यवसायमा लागेका महिलाहरूबाट के–कस्ता गुनासा आउँछन् ?
धेरै खालका गुनासा आउँछन् । सबैभन्दा बढी हामी रहरले यो व्यवसायमा आएका होइनौ तर समाज र राज्यले किन हामीलाई मात्र दोष दिन्छ भन्ने गुनासो आउँछ । हामीलाई किन राज्यले बुझ्दैन ? हामीले कुन त्यस्तो ठूलो अपराध गरेका छौं र राज्यले हामीलाई सधैं अपराधी भन्दै थुन्छ ? हामीले पुरुषकै चाहनामा सेवा दिइरहेका छौं । जहिले पनि पक्राउ गरेर ल्याउँदा हाम्रो मात्र प्रचार गरिन्छ तर पुरुषलाई किन संरक्षण गरिन्छ भन्ने गुनासो लिएर आउनेहरू धेरै छन् ।
नेपालमा महिला यौन व्यवसायी कति छन् ?
सरकारको तथ्यांकअनुसार म यौनकर्मी महिला हुँ भनेर नियमित स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन आउनेहरूको संख्या ५७ हजार छ तर त्यहाँ नपुगी लुकेर यो व्यवसायमा संलग्न हुनेहरूको संख्या पनि त्यतिकै छ, जो खुल्न चाहँदैनन् ।
तपाईंहरू यौनकर्मी महिलाको कुन पक्षमा वकालत गर्नुहुन्छ ?
हामी उनीहरूको मानव अधिकारको पक्षमा वकालत गर्छौं । हिंसा र स्वास्थ्यको कुरालाई प्राथमिकता दिन्छौं । सरकारले एचआइभीलाई शून्यमा झार्ने योजना ल्याएको छ । ती कुरालाई हेर्छांै । उनीहरूलाई तपाईं यौनकर्मी हो, यही काम गरिरहनुहोस् भन्ने होइन । यदि गरिरहेको छ भने सुरक्षित तवरबाट गर्न सुझाव दिने हो ।
वैकल्पिक पेसा अपनाउन जोड दिनुहुन्छ ?
दिन्छौं, तर राज्य यौनकर्मी महिलाहरूले चाहेअनुरूपको विकल्प दिनेभन्दा पनि झारा टार्ने तरिकाले प्रस्तुत हुन्छ जसले गर्दा यौनकर्मी महिलालाई परिवार सञ्चालनका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन गाह्रो हुन्छ । त्यही भएर धेरै जना चाहना हुँदाहुँदै पनि यो पेसा छोडेर विकल्पमा जान सकिरहेका छैनन् ।
त्यसका लागि राज्यले के गर्न सक्छ ?
राज्यलाई थाहा छ, नेपालमा यौनकर्मी महिला छन् र उनीहरू बाध्यताले यो पेसामा आएका हुन् अनि हामी सबैलाई थाहा छ उचित विकल्प दिन सके उनीहरू यो पेसाबाट बाहिर आउँछन् तैपनि राज्यले कहिल्यै यौनकर्मी महिलाहरू कस्तो वैकल्पिक व्यवसाय चाहन्छन् भन्ने कुरा सोध्न चाहँदैन । उनीहरूले चाहेजस्तो वैकल्पिक व्यवसायको वातावरण बनाइदिने हो भने यो ठूलो समस्या रहँदैन ।
यसलाई व्यवस्थित गर्न रेडलाइट एरियाको कुरा पनि उठ्ने गरेको छ ?
रेडलाइट एरिया छुट्याउने, पक्रेर धरौटीमा छोड्ने, जेल हाल्नेजस्ता कामले यो समस्या समाधान हुँदैन । समाधानका लागि राज्यलाई गाह्रो–अप्ठ्यारो छ भने हामीसँग सहकार्य गर्नुपर्‍यो । हामी समाधानका उपाय निकाल्छौं । अब उठ्छ रेडलाइट एरियाको कुरा, यो त झनै वाहियात कुरा हो । नेपाल जस्तो सानो देशमा सबैले सबैलाई चिनेकै हुन्छन् । त्यसले अझ ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ । यौनकर्मी महिला अहिले सहरमा मात्र होइन गाउँमा पनि छन्, खालि तरिका मात्र फरक छ ।
व्यवस्थित बनाउने बहस
यौन व्यवसायमा संलग्नहरूलाई व्यवस्थित गरी वैकल्पिक व्यवसायमा ल्याउन उनीहरूलाई अपराधीका रूपमा नभै नयाँ संयन्त्र बनाएर वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने तयारी भैरहेको केन्द्रका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे बताउँछन् । हिजोका दिनमा यौन व्यवसायीलाई प्रहरी प्रसासनबाट अपराधीका रूपमा हेर्ने काम पनि भएको थियो, डा. पाण्डे भन्छन्— राज्यको यो नीतिले रोगको जोखिम घटाउन सक्दैन, समस्याको समाधान पक्राउ गरेर छोड्नु मात्र होइन भनेर नयाँ संयन्त्र बनाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफलसमेत सुरु भएको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख विश्वराज पोखरेल पनि यौनकर्मी महिलालाई पक्राउ गरी दु:ख दिने मनसाय नरहेको बताउँछन् । पोखरेल भन्छन्— कुनै ठाउँमा इच्छा विपरीत यौन शोषण भएको उजुरी आउँदा मात्र प्रहरीले छापा मार्ने हो । हामी सहमतिमा हुने यौन सम्पर्क स्थल खोज्दै हिँड्दैनौं ।
यौनकर्मी महिला तथा व्यवसायलाई सरकारले हेर्ने नीति द्वैध भएकाले समस्या समाधान हुन नसकेको जागृति महिला महासंघकी वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत शान्ति तिवारी बताउँछिन् । तिवारी भन्छिन्— एकातर्फ नेपालमा यौन व्यवसायी छन् भनेर सरकार विभिन्न दातृ निकाय गुहार्दै करोडौं रुपैयाँ थाप्छ अनि अर्कातर्फ त्यही सरकार प्रहरी लगाएर यौनकर्मीलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएर दु:ख दिन्छ, दातृ निकाय एवं सरकारले उनीहरूमाथि गरिरहेको खर्च मात्र व्यवस्थापन गर्ने हो भने पनि समस्याको समाधान सहजै गर्न सकिन्छ । यसका लागि राज्यले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ ।